UGAAR AH DUMARKA: 6 Nooc Oo Ragga Kamid Ah Oo Ay Tahay Inaad Ka Fogaatid - Aayaha
Home»Editor's Picks»UGAAR AH DUMARKA: 6 Nooc Oo Ragga Kamid Ah Oo Ay Tahay Inaad Ka Fogaatid
Haddii uu ninka lasoo baxo calaamadahaan kulanka ugu horeeya ee haasaawaha kuuma qalmo ee ka fogoow.
Ragga aan isxakameyn karin
Ninka marka ugu horeeysa ee hasaawaha gacmo gacmeys bilaaba wuxuu kuu sheegay halka uu xiriirka u socdo, ninka aanan is xakameyn Karin kulanka ugu horeeya ee shukaansiga waa mid xiriirka dhan ka dhigaya galmo ama raaxo oo aanan dan kale lahayn,waxaana kasii daran inay u badantahay inuu ku qiyaanayo.
Ragga beenaalayaasha ah
Nin kasta oo been kuu sheega kulanka ugu horeeya ee hasaawaha ama shukaansiga waa kana ad u baahantahay inaad iska ilaalisid, nin aanan daacad noqon kulanka ugu horeeya ee shukaansiga wuxuu wax badan kaaga sheegay shaqsiyaddiisa, qofka uu yahay iyo waxaad ka filan kartid xiriir aad la sameysid.
Ragga aanan masuuliyadda qaadin
Ninka ka labalabeeya inuu qaado masuuliyad kulanka ugu horeeya ee haasaawaha ma qaadi doonto masuuliyad markaas kadib.
Kan hooyadiis wali ku hoos nool
Ninka wali kuhoos nool hooyadiis ee aanan korin isla markaana ah hooyo canjeero isii had iyo jeer sidaas ayuu ahaanaa waana mid aanan macquula ahayn inaad la yeelatid mustaqbal qurux badan, sababtoo ah wax kasta waa wax dusha ka saran hooyadiis.
Ninka dabeecadda xun
Ninka hore kaa tusa dabeecaddiisa xun sida caro deg deg ah, aanan isxakameyn Karin ama ilaali Karin dhaqankiisa waa ninka aad u baahantahay inaad iska ilaalisid,wuxuu noqon karaa kuwa haweenka garaaca.
Ragga dabeecadahaan lasoo baxa marka ugu horeeysa wa kasii darayaan marka uu xiriirka si dhab ah u bilaawdo.